Fijaliana mandrakizay any amin'ny helo - Fiangonan'Andriamanitra Soisa manerantany
lahatsoratra > Ny hoavy > Fampijalijaliana mandrakizay
Ny helo dia lohahevitra iray ifalian'ny mpino maro fa mampanahy azy ireo koa. Ny fampifandraisany aminy dia iray amin'ireo fampianarana mampifandrafy sy miteraka resabe amin'ny finoana kristianina. Ny ady hevitra dia tsy ny ao ihany no antoka fa ny kolikoly sy ny faharatsiana no tsaraina. Ny ankamaroan'ny Kristiana dia manaiky fa hitsara ny ratsy Andriamanitra. Ny ady hevitra momba ny helo dia ny momba ny ho endriky azy io, inona ny hafanana hanjaka ao ary hafirianao no hisehoanao. Ny adihevitra dia ny momba ny fahatakarana sy ny fampitana ny fahamarinana avy amin'Andriamanitra - ary ny olona dia te hamindra ny famaritan'izy ireo ny fotoana sy ny toerana ho mandrakizay.
Nefa tsy milaza ny Baiboly fa mila ny fomba fijerintsika ratsy Andriamanitra mba handikana azy ho amin'ny sariny mandrakizay momba ny mandrakizay. Raha ny filazan'ny Baiboly aza dia somary tsy mahagaga raha toa ny any amin'ny helo dia tsy fahita firy io raha ny marina no jerena. Rehefa miresaka momba ireo teôria, ohatra, ny momba ny hamafin'ny fijaliana any amin'ny helo - ny hafanana amin'ny hafanana ary ny faharetan'ny faharetan'ny faharetana - ho an'ny maro, dia miakatra ny tosidra ary mameno ny fihenjanana.
Ny Kristiana sasany dia mino fa ny finoana marina dia avy amin'ny afobe. Ny sasany dia tsy mahavita raha vao tena mahatsiravina indrindra. Izay fiheverana izay manalavitra an'izany dia esorina ho liberistisma, mandroso, mankahala ny finoana ary maniry ho tsy mampino, ary, tsy toy ny finoana izay mitohy amin'ny mpanota izay natolotry ny Andriamanitra tezitra, fa ny olona adala. Ny finoana sasany dia mino fa ny afobe dia zava-manahirana tsy takatry ny saina, fitsapana ny tena Kristianisma.
Misy Kristiana mino ny fitsaran'Andriamanitra nefa tsy dia diso loatra momba ny antsipiriany. Iray amin'ireny aho. Mino ny fitsarana masina izay ijoroan'ny afobe ho lavitra lavitra an'Andriamanitra; Na izany aza, raha ny antsipiriany, dia tsy inona aho fa dogmatika. Ary mino aho fa ny fiheverana heverina ho fahafaham-po mandrakizay ho fanehoana fahafaham-po ho an Andriamanitra tezitra iray dia mifanohitra tanteraka amin'ilay Andriamanitra be fitiavana araka ny ambara ao amin'ny Baiboly.
Misalasala aho ny amin'ny sarin'ny helo izay voafaritry ny rariny fanonerana - ny finoana fa mampijaly ny mpanota Andriamanitra satria mendrika izany izy ireo. Ary laviko tsotra izao ilay hevitra hoe afaka mampitony ny fahatezeran'Andriamanitra amin'ny fanendasana miadana tsikelikely ny olona (na farafaharatsiny ny fanahin'izy ireo). Tsy anisan'ny endrik'Andriamanitra araka ny fahalalako azy ny fahamarinana mamaly faty. Mino tanteraka aho na izany aza, ny fijoroana ho vavolon'ny Baiboly dia mampianatra fa hitsara ny ratsy Andriamanitra; Ankoatr'izay, resy lahatra aho fa tsy hampijaly olona mandrakizay izy amin'ny fampijaliana azy ireo ara-batana sy ara-tsaina ary ara-pihetseham-po.
Miaro ny hevitry ny tenantsika manokana ve isika?
Andalan-teny ara-Baiboly momba ny helo dia azo adika amin'ny fomba isan-karazany - ary dia ho. Ireo fandikana mifanohitra ireo dia miverina amin'ny kitapo teolojika sy ara-panahy an'ireo mpikaroka ao amin'ny Baiboly - araka ny teny filamatra: hitako io fomba io ary hafa endrika hafa io. Ny entanay dia afaka manampy antsika handray fehin-kevitra teôlôjia tsara sy manery antsika ary hitarika antsika lavitra ny fahamarinana.
Ny fijerena ny afobe izay asehon'ny Baiboly, ny pasitera sy mpampianatra ny Soratra Masina amin'ny farany dia toa tsy misy fiekem-pinoana, ilay atombok'izy ireo manokana ary io no tadiaviny mitory ao amin'ny Baiboly.
Ka na dia tokony tsy hanavakavaka tokoa aza isika momba ny tenin'ny Baiboly, rehefa tonga any amin'ny helo, ilaina ny ahatsiarovantsika fa matetika dia ampiasaina hanamafisana ireo finoana efa voalahatra. Nampitandrina i Albert Einstein: Tokony hiezaka hamantatra izay tena izy isika fa tsy izay tiana ho fantatra.
Betsaka ny kristiana izay milaza ho mpandala ny nentin-drazana no mino fa ny fahefan'ny Baiboly dia tandindomin-doza na eo aza izany tolona izany sy ho an'ny afobe. Araka ny hevitr'izy ireo, ny helo fotsiny azo avy amin'ny fampijaliana mandrakizay dia mifanaraka amin'ny fenitry ny Baiboly. Ny sarin'ny helo fa izy ireo dia tompon'antoka izay nampianarina azy. Ny sarin'ilay helo izay ilainao atao ny mitazona ny sata mifehy ny fomba fijerinao ara-pinoana. Ny sasany dia resy lahatra momba ny maha-marina sy ny filana ny sarin'izy ireo amin'ny helo ka tsy te-hanana porofo na fanoherana lojika fotsiny izy ireo izay manontany ny heviny.
Ho an'ny vondron'olona maro finoana, ny sarin'ny fampijaliana mandrakizay dia mampiseho ilay rambony lehibe sy mampatahotra.Ilay fitaovana famaizana izay mandrahona ny ondriny ary mitarika azy amin'ny lalana hitany. Raha ny afobe, araka ny fahitan'ny mpino mpiahy be dia be, dia fitaovana fitaovam-pitsipi-pitihana hitazomana ny ondriny hitaona, fa toa sarotra ny manakaiky ny olona hanatona an'Andriamanitra. Rehefa dinihina tokoa, ireo izay tafiditra ao amin'ireto vondrona ireto satria tsy te havela averina dia tsy voasarika amin'ity karazana fampiofanana ara-pivavahana ity noho ny fitiavana tsy manam-petra sy feno fitiavana an'Andriamanitra.
Amin'ny lafiny hafa, misy ny Kristiana izay mino fa ny fitsaran'Andriamanitra ny ratsy dia mitovy amin'ny fitsaboana microwave haingana - haingana, mandaitra ary somary tsy misy fanaintainana. Hitanao amin'ny fomba fanoharana ny angovo sy ny hafanana avoakan'ny fusion nokleary ho an'ny fandoroana tsy misy fanaintainana izay hanafahan'Andriamanitra ny ratsy, tsy misy isalasalana. Ireo Kristiana ireo, indraindray antsoina hoe mpisolo vava ny fandringanana, dia miseho amin'Andriamanitra fa i Dr. Nampahafantatra an’i Kevorkian (dokotera amerikanina iray izay nanampy marary 130 namono tena) izay nanome tsindrona mahafaty (niteraka fahafatesana tsy nisy fanaintainana) tamin’ireo mpanota natao ho amin’ny fahafatesana amin’ny afobe.
Tsy mino ny afobe amin'ny fampijaliana mandrakizay aho, nefa tsy miaraka amin'ireo mpiaro ny fandringanana ihany koa aho. Ireo fomba fijery roa ireo dia tsy miditra amin'ny porofo ara-baiboly rehetra ary raha ny hevitro dia tsy manao fahamarinana tanteraka amin'ilay Raintsika any an-danitra, izay aseho amin'ny fitiavana rehetra.
Ny helo, raha ny fahitako azy dia mitovy amin'ny elanelana lavitra an'Andriamanitra, fa mino aho fa ny herintsika, ny fetrantsika amin'ny resaka lojika sy ny fiteny, dia tsy mamela antsika hahalala ny ambaratongan'ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy afaka hanatsoaka hevitra aho fa ny didim-pitsaran'Andriamanitra dia ho mariky ny fisainana famaliana na ny fanaintainana sy ny fanaintainan'ny hafa amin'ny fiainany; satria tsy ampy porofo ara-baiboly ampy hanohana ahy ny teoria. Fa ambonin'izany rehetra izany, ny toetran'Andriamanitra dia malemy fanahy amin'ny sarin'ny helo, izay mampiavaka ny fampijaliana mandrakizay.
Manombatombana: Ahoana no ho any amin'ny afobe?
Amin'ny heviny ara-bakiteny, ny helo iray izay voan'ny fampijaliana mandrakizay dia midika hoe toerana marobe lehibe, izay mibahana ny hafanana, ny afo ary ny setroka. Io fomba fijery io dia manaporofo fa ny fahitan'ny olombelona ny afo sy ny fandringanana dia iray amin'ny iray mba hampitovina amin'ny fampijaliana mandrakizay.
Fa misy afobe tokoa ve ny helo? Efa misy io sa ve hatsipoka any aoriana any? Dante Alighieri dia namoaka fa ny helo dia kianja anatiny iray lehibe, ny tendron'ny nanindrona ny afovoan-tany. Na dia misy andinin-teny mifandraika amin'ny tany aza any amin'ny helo aza, dia natao ho an'ireo tsy eto an-tany ihany koa.
Ny iray amin'ireo adihevitra mankatoa ny lalànan'ny lojika momba ny lanitra sy ny helo dia ny fisiana ara-bakiteny ny iray dia midika hoe an'ny iray hafa. Kristiana maro no namaha an'ity olana lojika ity tamin'ny fampitoviana ny lanitra amin'ny fanakaikezana mandrakizay an 'Andriamanitra, raha toa kosa ka manondro ny halavirana mandrakizay avy amin'Andriamanitra mankany amin'ny helo. Saingy ireo mpanohana ara-bakiteny ny sarin'ny helo dia tsy faly amin'ny fomba fijery izay antsoiny hoe fandosirana. Nohamafisin'izy ireo fa ny fanambarana toy izany dia tsy hoe fanalefahana ny firariana teolojia fotsiny. Ahoana anefa no hahatonga ny helo ho toerana azo hamarinina, azo jerena ara-jeografika, toerana raikitra (na taloha sy ankehitriny, anisan'izany ny mandrakizay na toy ny afobe, ny vainafon'ny famaliana dia mbola tsy maintsy atao mamiratra), izay misy ny fanaintainana ara-batana amin'ny fampijaliana mandrakizay. any amin'ny helo ve dia fanahy tsy misy olona no maharitra?
Ny sasany mpiaro ny finoana ara-bakiteny dia manaporofo fa rehefa tonga any amin'ny helo izy ireo dia hametraka zavatra manokana Andriamanitra tsy mendrika ny lanitra izay feno mpankasitraka tanteraka. Io fiheverana io - ny fahasoavana mampanantena famelan-keloka dia hametraka ireo fanahy ireo ao anaty afobe izay hahatonga azy ireo hahatsapa fanaintainana tsy misy farany - natsangan'ny olona manan-tsaina izay toa feno fahatsorana feno fahatokiana. Ny sasany amin'ireto mpiaro tena ara-bakiteny ireto dia mino fa tokony hampitonina ny fahatezeran'Andriamanitra; koa ny fanahy natolotra ny helo dia nomena ny akanjo namboarin'Andriamanitra fa tsy avy amin'ny fitaovam-piadiana nampijaly an'i satana.
Fijaliana mandrakizay - fahafaham-po ho an Andriamanitra na ho antsika?
Raha ny sarin'ny afobe toy izany, noforonin'ny fampijaliana mandrakizay, dia mety ho gaga iray raha ampitahaina amin'ny andriamanitry ny fitiavana, isika olombelona koa dia afaka mahazo zavatra avy amin'ny fampianarana toy izany. Amin'ny fomba fijerin'olombelona iray fotsiny, dia tsy raisina amina hevitra isika fa misy olona afaka manao zavatra ratsy nefa tsy ampamoahina. Te-hahazo antoka isika fa ny famaizana marina nataon'Andriamanitra dia tsy mamela ny olona hiala amin'izany. Ny sasany dia miteny ao anatin'io toe-javatra io mba hampitony ny fahatezeran'Andriamanitra, fa io fahatsapana an-kolontsaina forensika io dia tena fanavaozana nataon'olombelona fa ny fahamarinana ihany no mahatonga ny fahatakarantsika ny fahamarinana. Na izany aza, tsy tokony afindrantsika ny fiheverantsika ny filalaovana ara-drariny an'Andriamanitra, ka heverintsika fa tian'Andriamanitra ny ho tony tahaka ny ataontsika.
Tadidinao ve fa fony ianao mbola kely dia tsy andao ny fampandrenesana ny ray aman-dreninao amin'ireo tsy mety manameloka ny mpiray tam-po aminao? Tsy nanaiky ny hijery ny mpiray tam-po aminao ianao fa tsy misy na inona na inona, indrindra fa raha efa voasazy noho io fandikan-dalàna io ihany ianao. Ny tanjona dia ny hifanaraka amin'ny fahatsapan-tena momba ny fandanjalanjana ny fahamarinana. Fantatrao angamba ny tantaran'ny mpino izay matory amin'ny alina satria resy lahatra izy fa misy olona afaka miala amin'ny fahadisoana tsy misy torimaso tsy matory.
Ny fampijaliana mandrakizay any amin'ny afobe dia afaka mampionona antsika satria mifanaraka amin'ny fanirian'ny olombelona ny fahamarinana sy ny filalaovana ara-drariny. Saingy ny Baiboly dia mampianatra antsika fa Andriamanitra dia mihetsika eo amin'ny fiainan'ny olona amin'ny alàlan'ny fahasoavany fa tsy ny famaritana nataon'olombelona natao tamin'ny lalao milay. Ary ny Soratra Masina koa dia manazava mazava tsara fa ny olombelona dia tsy manaiky foana ny halehiben'ny fahasoavana mahatalanjona. Ho hitako fa hahazo izay mendrika ianao ary homen'Andriamanitra antoka fa hahomby ianao. Ny fananantsika ny fahamarinana, izay matetika mifandraika amin'ny fitsipiky ny Testamenta Taloha, maso maso , Manangana nify ho an'ny nify, fa mijanona kosa ny hevitra ambongontsika.
Na manao ahoana na manao ahoana ny fahafoizan-tenantsika amin’ny fanarahana teolojiana iray na koa ny teolojia systematika izay mametraka ny fampiononana ny fahatezeran’Andriamanitra, dia mitoetra ny fahamarinana fa an’Andriamanitra irery ihany ny fomba itondrany ny fahavalo (azy sy antsika). Mampahatsiahy antsika i Paoly hoe: Ry namako, aza mamaly ratsy, fa omeo toerana ny fahatezeran’Andriamanitra; fa voasoratra hoe: 'Ahy ny famaliana, Izaho no hamaly, hoy Jehovah' (Rom. 1).2,19).
Maro amin'ireo sariitatra amin'ny antsipirihan'ny Helo izay mampahomby volo sy mampatahotra ary mampandatsa-drà izay henoko sy novakiako dia avy amin'ny loharanon-kevitra ara-pivavahana sy forum izay mampiasa mazava ny fiteny mitovy amin'ny toe-javatra hafa ankoatra ny tsy mendrika sy ny barbariana, satria mety hanameloka ny fanirian'olombelona izany. fa ny fandatsahan-dra sy ny herisetra no miteny ny teny. Fa ny faniriana mafy ny amin’ny famaizana ara-drariny avy amin’Andriamanitra dia lehibe aoka izany, hany ka, raha tsy misy fototra ara-Baiboly voatokana, dia ny fitsarana entin’ny olombelona no mahazo fahefana. Ireo mpihetraketraka ara-pivavahana, izay manizingizina fa ny fampijaliana mandrakizain’ny helo izay ampitainy, dia manompo an’Andriamanitra, misarika ny sain’ny maro amin’ny Kristianisma (jereo ny Jaona 1).6,2).
Sekoly ara-pivavahana ny manizingizina fa izay tsy mahafeno ny fenitry ny finoana eto an-tany dia tsy maintsy manonitra mandrakizay noho ny tsy fahombiazany. Ny helo, hoy ny Kristianina maro, dia natokana ho an’ny tsy voavonjy ankehitriny sy amin’ny ho avy. Tsy voavonjy? Iza marina ireo tsy voavonjy? Ao amin'ny faritry ny finoana maro, ny tsy voavonjy dia ireo izay mivoaka ivelan'ny fari-pinoany manokana. Ny sasany amin’ireo antokon’olona ireo, ary koa ny sasany amin’ireo mpampianatra azy, dia miaiky fa eo anivon’ireo voavonjy (avy amin’ny fampijaliana mandrakizay noho ny fahatezeran’Andriamanitra) dia mety hisy tsy anisan’ny fandaminany. Mety hihevitra anefa ny olona fa saika ny fivavahana rehetra izay mampiely sarin'ny helo novolavolain'ny fampijaliana mandrakizay dia mihevitra fa azo antoka indrindra ny famonjena mandrakizay raha toa ka mihetsika ao anatin'ny fetran'ny fiekena heloka.
Izaho dia mandà ny fiheveran-tena mivaivay sy mafy fo izay manolotra fiankohofana amin'ny andriamanitry ny hatezerana izay manameloka an'izay rehetra ivelan'ny fetra voafaritra tsara. Ny fanamafisana ny finoana izay misisika amin'ny fanamelohana mandrakizay dia azo atao fomba ahafahana manamarina ny fahatsaran'ny fahamarinana olombelona ihany. Noho izany, amin'ny fiheverana fa mitovy amin'Andriamanitra isika, dia afaka mandray andraikitra amin'ny maha-mpandraharaha mpitari-dia antsika izay manao dia lavitra nefa tsy miverina amin'ny mandrakizay izay asehon'ny fampijaliana; ,
Moa ve ny fahasoavana handroaka ny afobe mandrakizay?
Iray amin'ireo zavatra manan-danja indrindra sy mandritra izany fotoana izany ny fanoherana miorina amin'ny filazantsara amin'ny sary mahatsiravina indrindra amin'ny sary tsy azo trakaina ao amin'ny fampijaliana mandrakizay dia azo jerena ao amin'ny hafatry ny Vaovao Mahafaly. Ny finoana ny lalàna no mamaritra ny tapakila malalaka avy any amin'ny helo izay omena ny olona miankina amin'ny asa ataony. Ny tsy fahita firy amin'ny resaka afobe dia tsy azo ihodivirana, dia mitarika ny olona ho tafapetraka loatra. Mazava ho azy, afaka miezaka ny hiaina ny fiainantsika amin'ny fomba tsy mankany amin'ny helo isika amin'ny fiezahana miaina araka ny lisitr'ireo fandrarana sy fandrarana tsy ara-dalàna. Tsy manadino isika fa ny hafa dia mety tsy hitady mafy toa antsika - ary mba hahafahan'izy ireo matory tsara amin'ny alina, dia manolo-tena hanampy an'Andriamanitra isika hahita toerana any amin'ny helo misy ny fampijaliana mandrakizay tahiry.
Ao amin'ny sangan'asany The Great Divorce (Alemana: The Great Divorce or Between Heaven and Hell), CS Lewis dia mitondra antsika amin'ny fitsidihan'ny fiara fitateram-bahoaka ireo matoatoa izay niainga avy tao amin'ny helo ho any an-danitra amin'ny fanantenana ny hanana zo hijanonana maharitra.
Hitan'izy ireo ny mponin'ny lanitra, izay nantsoin'i Lewis ho navotana mandrakizay. Fanahy lehibe iray gaga raha mahita olona eto an-danitra izay fantany fa nampangaina ho namono olona sy novonoina tety an-tany.
Ny faniriana dia manontany hoe: Ny tiako ho fantatra hoe inona no tokony hataonao ho mpamono goddamn eto an-danitra raha mbola tsy maintsy mandeha aho ary mandany an'ireny taona maro lasa iny amin'ny toerana izay toa mitovy amin'ny kisoa.
Ny navotana mandrakizay dia miezaka manazava fa na ilay lehilahy novonoiny ary ny tenany nahita mihavana amin'ny Ray any an-danitra alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra.
Saingy tsy afaka hanaiky io fanazavana io ny saina. Manohitra ny fahatsapany ny rariny izany. Mihoatra lavitra ny tsy rariny ny fahalalana mandrakizay ireo avotra any an-danitra raha nohelohina hijanona any amin'ny afobe izy ireo.
Noho izany dia niantsoantso ireo navotana izy ary nitaky ny zony: tiako ihany ny zoko ... manana ny zo mitovy aminao aho, sa tsy izany?
Izany indrindra no tian'i Lewis hitarika antsika. Manao ny valiny voavotra mandrakizay izy: Izay azoko dia tsy azoko, raha tsy izany tsy ho eto aho. Ary tsy hahazo izay mendrika anao koa ianao. Mahazo zavatra tsara lavitra ianao (The Great Divorce, CS Lewis, Harper Collins, San Francisco, p. 26, 28).
Ny fijoroana ho vavolombelona ananan'ny Baiboly - azo takarina ara-bakiteny ve sa amin'ny fomba fiteny?
Ireo mpiaro ny sarin'ny helo izay tsy mety ho ratsy kokoa sy maharitra kokoa dia tsy maintsy manondro ny fandikana ara-bakiteny ny andalan-teny rehetra ao amin'ny Baiboly mifandray amin'ny helo. Ao amin'ny 1st4. Tao amin’ny sanganasany The Divine Comedy, i Dante Alighieri dia nihevitra ny helo ho toy ny toerana mampihoron-koditra sy fampijaliana tsy takatry ny saina. Toerana fampijaliana mampalahelo ny helo-n'i Dante, izay ahitan'ny olon-dratsy hivezivezy ao anatin'ny fanaintainana tsy misy fiafarana sy hidoboka amin'ny rà rehefa mihalevona any amin'ny mandrakizay ny kiakany.
Ny sasany tamin'ireo raim-piangonana tany am-boalohany dia nino fa ireo navotana any an-danitra dia afaka mitory amin'ny fotoana tena ny fampijaliana ilay voaheloka. Manaraka ny fomba mitovy, ny mpanoratra sy mpampianatra amin'izao fotoana izao dia milaza fa ao amin'ny afobe ny Tsitoha mba hahalala bebe kokoa fa ny didim-pitsarany amin'Andriamanitra dia tanterahina. Ny sasany mpanaraka ny finoana kristiana dia mampianatra fa ireo any an-danitra dia tsy hanahy ny hahafantatra ny ankohonany sy ny olon-tiana hafa any amin'ny afobe, fa ny fahasambarana mandrakizay dia avy amin'ny fahalalana ny fahamarinan'Andriamanitra mihoatra noho ny rehetra, nitombo ary niahiahy ny olona izay tia azy teto an-tany, izay tsy maintsy miaritra ny fijaliana tsy misy farany, dia toa tsy misy dikany izany.
Rehefa manomboka mampidi-doza ny finoana ara-bakiteny ny Baiboly (miaraka amin’ny fiheverana diso momba ny rariny), dia mahazo vahana haingana ny eritreritra tsy mitombina. Tsy azoko an-tsaina hoe ahoana no ahafahan’ireo izay tonga ao amin’ny fanjakany any an-danitra noho ny fahasoavan’Andriamanitra, amin’ny fampijaliana ny hafa – mainka fa ny olon-tiany! Fa kosa, mino an 'Andriamanitra tsy mitsahatra ny mitia antsika aho. Mino koa aho fa misy fanoritsoritana sy fanoharana maro ampiasaina ao amin’ny Baiboly izay — nomen’Andriamanitra — tokony ho azon’ny olona araka ny heviny. Ary Andriamanitra dia tsy nanome tsindrimandry ny fampiasana ny fanoharana sy ny teny tononkalo amin’ny fanantenana fa hanova ny heviny amin’ny fandraisana azy ara-bakiteny.